မိခင်ပဲစားရင် ကလေးဝမ်းသက်ပါသလား? – BurmeseHearts
မိခင်ပဲစားရင် ကလေးဝမ်းသက်တယ်လို့ မြန်မာတွေရဲ့ အယူအဆ မမှန်ပါ။ ပဲဟာ Protein လို့ခေါ်တဲ့ အသားဓါတ်ကိုပေးပြီး ပဲစားလို့ ဝမ်းသက်တဲ့အဖြစ်တွေဟာ ချက်ထားတဲ့ ပဲကို ယင်လုံအောင် မထားသိုလို့ မသန့်ရှင်းတဲ့ (ဝမ်းရောဂါ ပါလာတဲ့) ယင်နားရာကနေ ပဲစားတဲ့မိခင် ဝမ်းသက်ရခြင်းပါ။
ပဲစားတဲ့မိခင် ဝမ်းမသက်ဘဲ ကလေးဝမ်းသက်တယ်ဆိုရင် ဝမ်းရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါပိုးဟာ ကလေးပါးစပ်ထဲကို တနည်းနည်းနဲ့ ရောက်သွားလို့ ကလေးဝမ်းသက်တာပါ။
ကလေးအမေဖြစ်သူ သရက်သီးစားလို့ ၊ မုန့်ဟင်းခါးစားလို့ နို့စို့ကလေး ဝမ်းသွားတတ်ပါသလား?
စာရေးဆရာမ ရတုမှ နှုတ်ဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်
BurmeseHearts	 Jul 2, 2016 0
ဥတစ်လုံးရဲ့ အကာနဲ့အနှစ်မှာ ဘယ်ဟာက ပိုအားရှိသလဲ?
ဘယ်အချိန်မှာမှ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာကို သတိထားမိလေ့ရှိသလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေဟာ ဘာကြောင့် နှစ်ယောက်စာ ပိုစားသင့်သလဲ?
ဗိုက်ခွဲမွေးထားတဲ့ဒဏ်ရာက ကိုက်ခဲနာကျင်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ?
ပဋိသန္ဓေတည်ခြင်း လက္ခဏာများ အပိုင်း(၂)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော လက္ခဏာများ အပိုင်း(၂)